Torohevitra 4 ho voalohany amin'ny motera fikarohana Google - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Raha misy hazakazaka lava kokoa noho ny fizaran-tany Formula 1, dia ny hazakazaka fikarohana Google. Amin'ny ambaratonga SEO, misy mitady ho voalohany amin'ny besinimaro. Rehefa misy manoratra teny iray, raha miresaka momba izany ny habaka ataontsika dia maniry ny hiseho aloha isika. Eny ambanin'izay mandoa ihany. Farafaharatsiny manandrana izahay.
Ao amin'ny Google dia sarotra be ny mametraka ny tenanao fa tsy vitan'ny hoe soso-kevitra mendrika antsika izany. Manana andraikitra ny fifamoivoizana ataon'ny mpampiasa sy ny atiny lehibe. Izany no antony tsy fitaka ireto dingana manaraka horaisintsika ao amin'ny lahatsoratra ireto. Izy ireo dia vondron-javatra tsy maintsy ataonao, saingy, tsy dia be loatra, ny fahafantaranao ireo. Ny atiny dia tokony hifanaraka amin'ireo tag, sokajy, meta description, sns. Amin'ity fomba ity dia ho akaiky kokoa ny toerana 1 ianao amin'ny laharana amin'ny mombamomba anao.
Ity manaraka ity toro-hevitra ho voalohany amin'ny motera fikarohana Google Hanatona anao akaiky kokoa azy ireo izy ireo.
2 Mifanaraka amin'ny mpihaino anao
3 Fifaninanana, mpiara-dia ihany koa
4 Sary, manan-danja kokoa noho ny toa azy
Ny famoronana kalandrie fanontana dia mamela anao hanao laharam-pahamehana ny asan'ny atiny, midira amina cadence miaraka amin'ny famoahana bilaogy sy ny hetsika ara-tsosialy. Ny tena zava-dehibe dia tazomy ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fisorohana ny atiny tsy hijanona na hiverimberina.
Zava-dehibe tokoa ny fandaminana mba hahombiazanana dia tsy ho mora foana aza ny drafitra atiny. Atombohy amin'ny fananganana kalandrie, avy eo ati-doha - inona avy ireo fanontaniana azonao valiana? Inona ireo lohahevitra mifandraika amin'izany? Ahoana no ahafahanao manome aingam-panahy?
Zarao ho toy ny lahatsoratra ara-tsosialy, lahatsoratra bilaogy, kopia an-tranonkala ny atiny, referansa, horonan-tsary, sns. Araka ny endrika bilaogy, tranonkala, tranokala an-tànanao. Ary ambonin'izany, ny fampiroboroboana anao, satria ny atiny dia mahalana vao mahomby amin'ny azy manokana, ary mandrafitra ny fahita matetika: isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana.
Mifanaraka amin'ny mpihaino anao
Ny fifantohana amin'ny atiny dia tokony hapetraka amin'ny besinimaro mitsidika ary mandray anjara amin'ny fahombiazan'ny orinasanao. Ny mpitsidika vaovao, ohatra, dia tsy manana fahatokiana amin'ny marika. Noho izany, ny fifantohana dia tokony hapetraka amin'ny atiny manentana ny fanahy hanova, ny atiny sy ny tanjona ary ny soatoavina marika tokony hikolokoloana.
Ny mpanjifa efa misy kosa dia manana laharam-pahamehana sy filàna hafa., noho izany ny atiny dia tsy maintsy entina amin'ny fomba hafa. Ny fikolokoloana azy ireo, ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ary ny fanamorana ny fahaizan'ny upsell no lakilen'ny fanentanana ny mpanjifa sy ny varotra amin'ny ho avy.
Fifaninanana, mpiara-dia ihany koa
Azonao atao ny mahita ny paikadin'ny orinasa amin'ny fifaninanana azo omena anao. Izany hoe raha mivarotra menaka manitra amin'ny Internet ianao dia tadiavo ireo teny lakile izay ampiasain'ny fifaninanana misy anao. Azonao atao ny mamorona dinika mitovy ary manintona fitsidihana vaovao amin'ny orinasanao. Amin'izany dia mitombo ny habetsahan'ny fifamoivoizana mahatratra ny fonenanao.
Sary, manan-danja kokoa noho ny toa azy
Indrindra rehefa miresaka momba ny vokatra tena izy toy ny ranomanitra voalaza etsy ambony. Ny atiny hita maso, toy ny sary, horonan-tsary ary infografika, dia mety ho fitaovana matanjaka be ho an'ny marika mitady hifandray amin'ny fomba mandaitra kokoa amin'ireo mpamaky azy.
Atombohy amin'ny fizarana ny soratra amin'ny vatanao miaraka amin'ireo sary manintona (ampidiro ny sary Alts) hamporisihana ny mpihaino anao hamita ny famakiana sy hampitombo ny laharanao amin'ny motera fikarohana. Ny infografika koa dia manampy amin'ny fanangonana atiny amin'ny efijery hita maso manintona ary mora azo.
Manantena anao hanolotra atiny video koa ireo mpitsidika ny tranokalanao. Asehoy ny toetranao rehefa mifandray amin'izy ireo ianao rehefa manome fampahalalana mifanaraka amin'ny ilain'izy ireo. Ny horonantsary, ny fampisehoana ary ny fijoroana ho vavolombelona ataon'ny mpanjifa dia fotoana rehetra handinihana.
Ireo torohevitra ireo toy ny maro hafa dia afaka manampy antsika hametraka ny bilaogintsika amin'ny laharana voalohany. Ilaina ny mandray ny teboka farany azo atao, noho ny fangatahana lehibe misy ao amin'ny tambajotra. Raha heverintsika fa hivarotana vokatra na hanoratantsika lahatsoratra dia misy tranokala an-tapitrisany maro, asa bebe kokoa no tsy maintsy ataontsika. Satria ny atiny sy ny toeran'ny SEO amin'ny alàlan'ny programa toa an'i Yoast SEO dia manan-danja lehibe amin'ny vokatrao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Torohevitra 4 ho voalohany amin'ny motera fikarohana Google
Famolavolana franchise hanao asa fiantohana